कथा : रोहिनी (३३) – शुसान्त क्षेत्री आँसु – KhabarTime
कथा : रोहिनी (३३) – शुसान्त क्षेत्री आँसु
सुस्मिताको आँखा खुल्यो जब उनको आँखा खुल्यो तब बिहानको १० बजिसकेको थियो । चारै तिर हेर्दै धेरै पो सुतेछु अब आकाश आफन्त कहाँ बाट लिएर आउने होला फेरि पनि उनको मनमा त्यहीँ आकाशको आफन्त खोज्ने दिमागमा कुराले घर बनाउन थाल्यो ।
यत्तिकैमा उता बाट हिजोकै डाक्टर बाहिर आउँदै हुनुहुन्थ्यो , हताअर हतात गर्दै सुस्मिता डाक्टरको नजिकै पुगिन
सुस्मिता : डाक्टर साब, डाक्टर साब… अहिले कस्तो छ आकाशलाई ?
डाक्टर : लामो सास फेर्दै Sorry .. सुस्मिता जी!
मैले हजुरलाइ बार बार भनेकै छु त आकाशको आफन्त बिना यो उपचार गर्न सम्भव छैन, भोलि सानो गल्तीले हामी सबैको जिन्दगी बर्बाद हुनेछ ।
दिमागको उपचार जस्तो कुरा आफन्तको सहमति बिना हामी कदापि पनि गर्न सक्दैनौं त्यसैले जति सक्दो चाँडै आफन्तको खोजि गर्न तिर लाग्नु होला ।
यति भनेर डाक्टर सरासर आफ्नो कार्य तिर लाग्नु भयो ।
सुस्मिताको दिमागमा भने भुइचालो नै ल्याउदै थियो , के गर्ने कसो गर्ने कहाँ बाट ल्याउने आकाशको आफन्त सुस्मिताको दिमागमा यस्तै कुरा दिमागको नाशा नशामा घुम्दै थियो ।
आकाशको आफन्त पत्ता लगाउने एउटै माध्यम अनिता थिइन् संयोग बस अनिता पनि उपचारको लागि दाङ हस्पिटलमा उपचार हुँदै थियो अब सुस्मिताको दिमागले पुरै तरफ बाट काम गर्न छोडिसकेको थियो ।
उता चाहाना पनि भगवान सँग अनिताको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बार बार आफ्नो बिन्ती सुनाउदै थिइन् ।
अनिताको उपचार हुन सुरु भए देखि नै चाहानाको पनि दिनको भोक अनि रातको निद्रा नै गायब भैसकेको थियो उनको मदिमागमा बस त्यहीँ अनिता अनुहार मात्र नाच्दै थियो।
रोहिनी भने दिन प्रती दिन झन झन ठुली हुँदै थिइन् सम्झनाको आमा बाबाको मायाले फुर्केकी रोहिनी अति सुन्दरी थिइन् उस्तै पढाइमा पनि राम्रो नै थिइन् ।
एकदिन स्कुलमा कक्षा स्तरीय वादविवाद प्रतियोगिता भयो जसको शीर्षक धन भन्दा बिद्या ठुलो थियो । जुन शिर्षकको विपक्ष तर्कहरु प्रस्तुत गर्ने जिम्मा रोहिनीलाई पनि पर्‍यो ।
बिद्या भन्दा धन नै ठुलो हो भन्ने बिषय लिएर रोहिनीले आफ्नो गहकिलो तर्कहरु प्रस्तुत गर्दै सबैको मन जित्न सफल भइन । उनको बोलचाली देखि लिएर हरेक हाउभाउ सबै राम्रो देखेर निर्णय मण्डलहरुले रोहिनी प्रथम भएको भन्दै घोषणा गरिदिए ।
त्यो प्रथम भएको सुन्दा रोहिनीको आँखाबाट खुशीको आँसु बरर झर्न लाग्यो रोहिनीले आमा अनितालाई अनि उनको बाजे बजै भन्दा पनि प्यारो सम्झनाको बाआमालाई मिठो सम्झना सम्प्रेषण गर्दै पुरस्कार ग्रहण गर्दै घर तिर लागिन ।
घरमा पुगेर त्यो खुसीको कुरा सम्झनाको बाआमालाई सुनाउदै खुशी व्यक्त गरिन त्यो देखेर सम्झनाको बाआमा पनि अति प्रसन्नता देखिदै थिए ।
उता सुस्मिताले आकाशको मोबाइललाइ नजिकैको मोबाईल पसलमा लगेर त्यो राखेको लक खोल्दै उसको गाउँ घरको कसैको नम्बर छ कि खोज्न थालिन् ।
आफन्तको नम्बर खोज्दै जादा भाउजू नाम सेभ गरेको नम्बर फेला पारिन ।
अब केही हुन्छ कि भन्दै सुस्मिताको आशाको दियो झन झन चम्किलो बल्न थाल्यो । खुसी हुँदै त्यही नम्बरमा फोन डायल गरिन ।
फोनको रिङ पनि गयो ।
Hello ….. उता बाट केटीको स्वरमा आवाज आयो
त्यो बोलीले सुस्मिताको आशाको दीप झलझली चम्केर बल्न थाल्यो । मुहारमा खुसी छायो ।
सुस्मिता : नमस्ते 🙏 हजुर
भाउजू : नमस्ते नमस्ते , को बोल्नु भयो होला ?
सुस्मिता : म आकाशको साथी हो है भाउजू , सुस्मिताले भाउजू साइनो लगाउदै बोल्न थालिन् ।
भाउजू : ए ए होर नानी , अनि किन कसरी सम्झनु भयो होला त हामीलाई जान्न पाए हुन्थ्यो ???
सुस्मिता : हजुर सँग केही सहयोग माग्नको लागि फोन गरेको थिए , आशा छ नाइँ भन्नू हुनेछैन ।
भाउजू : के हो र ? नानी त्यस्तो सहयोग हामीबाट हुन सक्ने सहयोग त हामी अवस्य पनि गर्नेछौं के होला भन त ???
यत्तिको साथ सपोर्ट गरेपछि सुस्मिताको मनमा आशाको मुना पलाएर आयो अब उनले उनलाई चाहिएको सहयोग भाउजु सामु निर्धक्क भएर भनिन् ।
सुस्मिता : आकाशको टाउकोमा गहिरो चोट लागेकोले उसको दिमागको अपरेसन गर्नु पर्ने रे अनि आफन्त बिना नहुने भयो त्यसैले हजुरलाई फोन गरेको ।
सुस्मिताले आकाशलाई के कसरी त्यस्तो भएको थियो के कारणले आफन्त खोजेको हो सबै कुरालाई आकाशको भाउजूको सामु खोलिन ।
त्यो कुरा सुनेर आकाशको आफन्तहरु भोलि नै सहर आउने प्रतिक्रिया पाए पछि सुस्मिता खुसी हुँदै फोन राखिन ।
अब सुस्मिताको खुसीको तह केही हदसम्म माथी बढेको थियो उनको मुहारमा पहिलेको भन्दा केही फरक चमक आउँदै थियो ।
अनिताको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरु मध्य एकजना डाक्टर बाहिर तिर आए …..
चाहाना पनि केही शुभ सन्देश मिल्छ कि भनेर त्यहीँ डाक्टर तिरको यात्रामा आफ्नो पाइला अगाडि चल्न थालिन्।
चाहाना : डाक्टर साब अनितालाई कस्तो छ अहिले ?
डाक्टर : उनलाई केही भएको छैन अझै तर अब भने केही हुने सम्भावना देखिन्छ …..
चाहाना : होइन के भन्नू भएको डाक्टर साब के हुन्छ अनिता लाई , सिधा सिधा कुरा गर्नुस् न डाक्टर साब अनितालाई के भएको छ र त्यस्तो ?
चाहानाको आँखामा डरको रेखा ह्वात्तै बढेर आयो
डाक्टर : उसको शरीर बाट धेरै मात्रामा रगत बगेको कारण उसलाई ब्लड अत्यन्तै आवश्यक छ त्यो पनि ३० मिनेट भित्र नत्र जे पनि हुन सक्छ ।
अनि अर्को कुरा अनिताको ब्लड ग्रुप प्रायः पाउदैन यो ब्लड पाउन धेरै गाह्रो पर्छ समयमै बिचार गर्नु ।
यति भनेर डाक्टर सरासर आफ्नो काम तिर लाग्नुभयो
अब चाहानको दिमागमा फेरि अर्को भुइचालो आयो , जुन ब्लड पाउदै पाउदैन त्यहीँ ब्लड खोज्नु पर्ने त्यो पनि ३० मिनेट भित्र ……..
उफ ……. लामो सास फेर्दै चाहाना त्यहीँ थ्याच्च बसिन ।